Xog: Rooboow oo iska diiday inta badan Qodobo Xalay loo soo diyaariyay inuu Saxaafaddu u sheego, Maxay yihiin Qodobadaasi,? – Hornafrik Media Network
Xog: Rooboow oo iska diiday inta badan Qodobo Xalay loo soo diyaariyay inuu Saxaafaddu u sheego, Maxay yihiin Qodobadaasi,?
Hogaamiyihii Labaad ee ugu sareeyay Kooxda Alshabaab, Muqtaar Rooboow oo isku soo dhiibtay Dawladda Federaalka Somalia ayaa illaa iyo xalay waxaa socday Wadahadalo la doonayay in lagu qanciyo Qodobo ay Dawladdu u soo diyaarisay inuu la hortago Saxaafadda, Waxaana uu inta badan iska diiday Rooboow inuu Qodobadaasi ka sheego Shirkiisa Saxaafadeed uu Maanta qabtay.
Qodobadda ugu adkaa ee la isku mari waayay waxaa ka mid ahaa inuu qirto inuu Qaldanaa intii uu ka mid ahaa Kooxda Alshabaab, Isla markaana ka qoomameeyo wixii dhacay intii uu Hogaamiyaha Argagixisadda ahaa, Waxa uu sidoo kale diiday inuu dalbado Cafis, isagoona sheegay inuu ku yimid Waddahadal ee uusan ahayn Maxbuus dalbanaya in la cafiyo.
Dood iyo falanqayn dheer kadib waxay Dawladda Somalia aqbashay inay wax ka badasho Qoraalkii ay soo hordhigtay Rooboow, Isla markaana loo qoro sida uu rabo, taasoo keentay in la garan waayo Mawqifkiisa saxda Rooboow.
Rooboow waxa uu ku soo koobay Kooxda Alshabaab inay ku kala tageen kala duwanaansho Caqiido, Wuxuuse ka gaabsaday inuu ku tilmaamo Argagixiso, Wuxuusan sidoo kale soo hadal qaadin in Faham Qaldan oo Diineed ay ku socdaan Alshabaab oo ay marin habaabiyeen Dhalinyaradda Soomaaliyeed ee ka midka ah oo uu qaar badan oo ka mida isagu ku soo biiriyay Kooxda.
Marna ma uusan dirin Rooboow fariintii ugu muhiimsanayd ee ahayd inuu baaq u diro Horjoogayaasha iyo Maleeshiyaadka Kooxda inay isku soo dhiibaan Dawladda Somalia. Waxayna taasi muujinaysaa inuusan jirin isbadal wayn.
Rooboow waxa uu Shirkiisa Jaraa’id ku muujiyay doorka ay arrintiisa ku lahaayeen Sirdoonka Reer Galbeedka, isagoo u mahad celiyay Dawladda Somalia iyo Saaxiibadeeda Caalamka, taasoo aan horay looga baran Horjoogayaasha sidiisii kale isi soo dhiiba.
Inkastoo uu isi soo dhiibay Rooboow haddana marna ma uusan sheegan inuu isku dhiibay Dawladda Somalia ee uu waxa uu sheegay inuu Marti ugu yahay Muqdisho si uu wadahadalo ula yeesho Dawladda Somalia, iyadoona Wadahadaladaasi ay socdaan.
Shirka Jaraa’id ee Rooboow iyo Bayaanka uu akhriyay waa kuwo aan buuxin karin Shuruudaha in Qof Argagixiso ahaan jiray loogu aqoonsado inuu ka tanaasulay wixii uu ku jiray. Waxa kaliya ee isbadal ah oo laga arki karay Shirkaasi Jaraaid waxay ahayd inuu ka dhinac babanayay Calanka Soomaaliya oo horay uu ugu yaqaanay Calanka Daaquudka, iyadoona aysan hareerihiisa ka muuqan Calankii Madoobaa ee uu sidan jiray.
Hogaamiyayaal ka tirsanaa Alshabaab oo isaga ka horeeyay sida Zakariyo iyo Atam waxay si aan leex leexad lahayn u cadeeyeen Mawqifkooda, waxayna Cambaareeyeen Alshabaab oo ay ku tilmaameen Argagixiso marin habaabinaysa Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, Waxay dalbadeen Cafis, waxayna kuwa ku haray Kooxda ugu baaqeen inay isi soo dhiibaan, Balse Rooboow waxa uu u muuqdaa inuusan waxba ka badalnayn Xasan Dahir Aways oo isna ka mid ahaa Hogaamiyayaashii Alshabaab oo illaa iyo hadda aan cadayn Mawqifkiisa ku aadan Kooxdii uu ka soo cararay.
Alshabaab waxay sheegeen Rooboow in mar hore ay ka saareen Kooxda.
Xog: Golaha Wasiiradda Somalia oo isku shaandhayn lagu samaynayo.